Pixel Munyaradzi mishandirapamwe yevanhu & kodzero dzevanhu
Misangano yehunhu & kodzero dzevanhu
Zvirongwa izvo PixelHELPER inoshanda kuti ipe ruzivo rwevoruzhinji munyaya dzinoremekedzwa dzinoregererwa. Izvo zvinotarisirwa zvinotarisirwa zvinoshandiswa pano kuitira kuti zvive nekutaura kwekare uye yeInternet-based, hutachiona hutachiona hwemashoko iwayo. Kwose kugoverana kwemakambani ekudhirocial network kunobatsira uye kunokurudzirwa. Taura neboka rehama dzedu pamusoro pemishandirapamwe edu uye edza kutitsigira.
kurwisa mudzvanyiriri Erdogan
Sticky postOn 24. February 2021
Rakadzika Rakaomarara Rabhoritari Kodzero dzevanhu
European makedheni chingwa emergency emergency - chikafu kugadzikana kwe Africa
Kuzvimirira kubva kuHongKong / Anti China mushandirapamwe
Anomanikidzwa mushandi kuBahlsen Oetker & Co. KG
Unogona kuwana zvimwe zveedu macampaign pano ...
Misangano yehunhu & kodzero dzevanhu January 5th, 2021Oliver Bienkowski